Trump oo ku hanjabay inuu howlgelinayo milatari rabshadaha soo afjara - Tilmaan Media
Askariga dilka geystay Derek Chauvin oo lagu soo oogay dacwad dil ah ayaa maxkamadda la horgeyn doonaa toddobaadka soo socda. Halka askartii kiiska ku wehlisay shaqada laga eryey oo aan wax dacwad ah lagu soo oogin’
Madaxweynaha oo Isniinti gelinki dambe aqalka cad kula hadlay warbaahinta xiili ay mudaharaadyo ka socdeen meel aan ka fogeen halka uu warbaahinta kula hadlayey.
Wuxuu Mr Trump sheegay “dhammaan muwaaddiniinta Mareykanka iney aad uga naxeen ugana xumaadeen dilka bareerka ah ee loo geystay George Foloyd” balse ma aha iney murugta na haysay ay dad careysan naga baabi’yaan”.
Madaxweynaha ayaa rabshadaha iyo bililiqada caasimadda dalka ka dhacay Axaddii ku tilmaamay “ceeb aad u weyn” oo sumcaddi magaalada dhulka gelisay.
“Waxaan anigu howlgelinayaa kumannaan kun oo asakri oo aad u hubeysan, milatari iyo ciidamada ammaanka ee fulinta sharciga u xilsaaran si loo joojiyo rabshadaha, boobka, bililiqada iyo burburinta hantida qaranka iyo midda shacabka,” ayuu yiri.
Mr Trump wuxuu maamulka magaalooyinka iyo gobollada Mareykanka uu ku amray iney howlgeliyaan ciidamada ilaalada qaranka iyo ciidamada keydka si xaaladda degdegga ah ee dalka soo foodsaartay uga jawaabaan “oo aan tiro ku filan waddooyinka dhigno”. Ku dhawaad 16,000 oo askari ayaa ilaa iyo hadda la howlgeliyey si ay wax uga qabtaan xasilooni darrada dalkaasi ka taagan.
Wuxuuna intaa ku daray “haddii uu maamul magaalo ama gobol ay diidaan iney tallaabbada ku habbboon ay qaadaan… aniga ayaa howlgelinaya ciidamada qaranka oo awood leh iney dhibka muddo gaaban ku soo afjaraan.”
Hadalka madaxweynaha ka soo yeeray waxaa si weyn u cambaareeyey musharraxa madaxweynanimada ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden, wuxuu sheegay Mr Trump Militariga Mareykanka inuu u adeegsan rabo muwaaddiniinta mareykanka”.